PERIKOPA FJKM ALAHADY 15 NOVAMBRA 2015 | FJKM Amboniloha
PERIKOPA FJKM ALAHADY 15 NOVAMBRA 2015
Alahady XXIV manaraka Trinite – SAMPATI
Genesisy 39.1-10 / Marka 6.14-20 / 3 Jaona 1-8
1 [Ny nanaovana an’i Josefa tao an-trano-maizina] Ary Josefa nentina nidina ho any Egypta; ary Potifara, lehilahy Egyptiana, tandapan’i Farao sady mpifehy ny mpiambina, no nividy azy tamin’ny Isimaelita, izay nitondra azy nidina tany.
2 Ary Jehovah nomba an’i Josefa, dia lehilahy nambinina izy; ary nitoetra tao an-tranon’ilay Egyptiana tompony izy.
3 Ary hitan’ny tompony fa nomban’i Jehovah izy, ka izay rehetra natao­ny dia nambinin’i Jehovah avokoa teo aminy.
4 Ary Josefa nahita fitia teo imason’ny tompony, ka dia nanompo azy; dia notendreny ho mpikarakara ny tao an-tranony, ary izay rehetra nananany dia natolony ho andraikiny.
5 Ary hatramin’izay nanendreny azy ho mpikarakara ny tao an-tranony mbamin’izay rehetra nananany dia notahin’i Jehovah ny tranon’ilay Egyptiana noho ny amin’i Josefa; ary ny fitahian’i Jehovah nomba izay rehetra nananany, na ny tao an-trano, na ny tany an-tsaha.
6 Dia navelany ho andraikitr’i Josefa izay rehetra nananany; ary izy tsy nihevitra intsony izay rehetra nananany na inona na inona afa-tsy ny hanin-kohaniny ihany. Ary Josefa dia bikàna sady tsara tarehy.
7 Ary taorian’izany ny vadin’ny tompony nanopy ny masony hijery an’i Josefa ka nanao hoe: Avia handry amiko.
8 Dia nandà izy ka nanao tamin’ny vadin’ny tompony hoe: Indro, ny tompoko tsy mahalala izay tandremako ato an-trano, fa izay rehetra ananany dia efa natolony ho andraikitro avokoa.
9 Tsy misy lehibe noho izaho raha amin’ity trano ity, ary tsy misy zavatra narovany amiko afa-tsy ianao ihany, satria vadiny ianao; koa hataoko ahoana no hanao izany, ratsy lehibe izany ka hanota amin’Andriamanitra?
10 Ary na dia niteny tamin’i Josefa isan’andro aza ravehivavy, dia tsy nety nanaiky azy handry aminy izy na hiara-mitoetra aminy.
14 Ary nahare izany Heroda mpanjaka (fa efa nalaza ny anaran’i Jesosy), dia hoy izy: Jaona Mpanao-batisa efa nitsangana tamin’ny maty izay, ka izany no ananany hery hanao ireo asa lehibe ireo.
15 Fa hoy ny sasany: Elia Izy; ary hoy ny sasany: Mpaminany Izy dia toy ny anankiray amin’ny mpaminany.
17 Fa Heroda ihany no naniraka sy nisambotra an’i Jaona ka namatotra azy tao an-tranomaizina noho ny amin’i Herodiasy vadin’i Filipo rahalahiny; fa nanambady azy izy.
18 Fa Jaona efa nilaza tamin’i Heroda hoe: Diso ianao, raha manambady ny vadin’ny rahalahinao.
20 Fa Heroda natahotra an’i Jaona, satria fantany fa lehilahy marina sy masina izy, ka dia niaro azy izy; ary rehefa nandre azy izy, dia very hevitra be ihany*; ary nihaino azy tamin’ny hafaliana izy.[*Na: nanao zavatra maro]
3 Jaona 1-8
1 [Fisaorana an’i Gaio noho ny nandraisany vahiny, sy filazana ny amin’i Diotrefa sy Demetrio] Izaho loholona* mamangy an’i Galo, ilay malala, izay tiako amin’ny fahamarinana. [* Gr. Ny presbytera]
2 Ry malala, mangataka aho mba hambinina sy ho salama amin’ny zavatra rehetra anie ianao, tahaka izay anambinana ny fanahinao ihany.
5 Ry malala, manao asa mahatoky ianao na amin’inona na amin’inona ataonao amin’ireo rahalahy ireo, na dia vahiny aza izy,
6 izay nanambara ny fitiavanao teo anatrehan’ny fiangonana*; dia ho soa no ataonao, raha mamoaka azy koa araka izay miendrika hatao noho ny amin’Andriamanitra ianao; [* Gr. eklesia]
7 fa noho ny Anarana no niangany, ka tsy naka na inona na inona tamin’ny jentilisa izy.
8 Koa isika dia tokony handray tsara izay toy izany, mba ho mpiara-miasa aminy amin’ny fahamarinana.
Catégories :	Perikopa FJKM	/ par AnjGab 10 novembre 2015